WordPress: CMS ဆိုတာဘာလဲ။ Utility နှင့် Features Linux မှ
WordPress: CMS ဆိုတာဘာလဲ။ Utility နှင့် Features
WordPress: လူကြိုက်အများဆုံး CMS အကြောင်းအရာအားလုံး
WordPress သည်သုံးစွဲသူများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ လုံခြုံမှုနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုတို့ကိုအလေးပေးသောဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပြီး၎င်းကိုယနေ့လူကြိုက်အများဆုံး CMS ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးသောပြင်ဆင်မှုများနှင့်အလွယ်တကူအလုပ်လုပ်သော SW အလွန်ကြီးသော SW သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်မည်သည့် Blogger သို့မဟုတ် Digital Content Creator ကိုမဆိုသူတို့၏အလုပ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ဝေမှုများ၊ ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအလွယ်တကူအာရုံစိုက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
CMS (အင်္ဂလိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (သို့) Content Management System မှ) WordPress ၎င်းသည်အခြေခံထုတ်ကုန်တစ်ခုသာမကသူ၏ကိုင်တွယ်မှု ၎င်းသည်ရိုးရှင်း။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုဒါပေမယ့် ဒါ့အပြင်အစွမ်းထက်အင်္ဂါရပ်များနှင့် add-ons တွေကိုပေးထားပါတယ် (Themes, Plugins, အခြားသူများအကြား) ၎င်းသည်လျှောက်လွှာတစ်ခုအဖြစ်ကြီးထွားလာရန်နှင့်၎င်းနှင့်အတူဖန်တီးထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏တိုးတက်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။
2 CMS ဆိုတာဘာလဲ။
2.3 utility ကို
2.4.1 Web access
2.4.4 အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု interface ကို
2.4.8 Plugins များနှင့် Interfaces Programming
2.4.9 စီစဉ်ထား / စိတ်ကြိုက်အမြင်အာရုံဒီဇိုင်း
2.4.11 SEO ဆိုသည်မှာ positioning ကို
3 WordPress ကိုကဘာလဲ?
ပြီးပြီ FromLinux ဘလော့တွင် WordPress အကြောင်းအခြားတင်ပို့ချက်များ ကျွန်ုပ်တို့သည်သီးခြားကဏ္aspectsများဖြစ်သောဤအရာကားအဘယ်နည်း။ ၂.၀၁၅ ခုနှစ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် «တိုးတက်လာသော WordPress.com နှင့်တွေ့ဆုံပါ၊ Calypso!«၎င်းကို ၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေသော Apache2 နှင့် Nginx နှင့်အတူ၎င်း၏တပ်ဆင်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ «Debian Jessie အပေါ် WordPress 4.5 Multisite တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း« y «WordPress ကို Ubuntu 18.04 နှင့် derivatives များကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။« အသီးသီး။
ယခုအချိန်တွင်သူတို့၏အသုံးအရှိဆုံးသို့မဟုတ်အကြိုက်ဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများအကြောင်းထုတ်ဝေမှုများကိုလည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများနှင့်အတူဖန်တီးထားသည် «သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော WordPress plugins ၈ ခု« y «3 သင်၏ WordPress ၌သင်လက်လွတ်မသွားနိုင်သော Freemium Plugins«။ ဆောင်းပါးများရေးသားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့၏ခေါင်းစဉ်များနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးပေါ်လစီများကဲ့သို့သောအခြားအရာများအပေါ် မူတည်၍ ထုတ်ဝေခြင်းမရှိပါ။
ဒီ post မှာတော့ CMS ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပါမယ်။၎င်းသည် WordPress ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခြင်းအပြင်မည်သည့်အသုံး ၀ င်မှုနှင့်၎င်းကိုဝိသေသလက္ခဏာများအဖြစ် SW အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
CMS ဆိုသည်မှာမည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းအသေးစိတ်မရှင်းလင်းမီ၎င်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကောင်းသည် ကွန်ပြူတာသိပ္ပံ (သို့) Web Technology အစတွင်အတော်လေးရိုးရှင်းသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်နိုင်သည်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ပင်လျှင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်မည့်အခါမြင့်မားသောအမြင်အာရုံအရည်အသွေး၊ လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတို့ပါ ၀ င်သည်။
လက်ရှိအကြောင်းအရာများကိုပြုပြင်ခြင်း၊ ကဏ္andများနှင့် module များရှာဖွေခြင်းနှင့်တည်နေရာရှာဖွေခြင်းနှင့်ဆာဗာရှိစာမျက်နှာများနှင့်ပုံများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခြင်းစသည်တို့ကိုတခါတည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပရိုဂရမ်မာများသို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်တီထွင်သူများကသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာများသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုများကိုအသုံးပြုသည်၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဦး တည်စေသည်
ဤအခြေအနေသည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောကိရိယာတစ်ခု၊ကျွမ်းကျင်သော ၀ န်ထမ်းများ၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာအရင်းအမြစ်များသို့မဟုတ်အခြားပြင်ပကိရိယာများမပါဘဲ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုဖန်တီးရန်နှင့်ပေါင်းစည်းထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဤလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပထမဆုံး "Content Management Systems" သို့မဟုတ် CMS ကိုစတင်ဖန်တီးခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် အလွန်အသုံးဝင်ပြီးအတိုချုပ်အနေဖြင့် CMS ဆိုသည်မှာ
၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်၊ စီမံရန်နှင့်စီမံရန်အတွက်ဆော့ဝဲလ်တစ်ခု။ "
နှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန်လမ်းအတွက်, CMS ကဘာလဲ:
ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်၊ စီမံခန့်ခွဲရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အသစ်ပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်ပေါင်းစည်းထားသည့်ဖွံ့ဖြိုးမှုပတ်ဝန်းကျင် (IDE) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတွင်များစွာသောရွေးချယ်စရာများနှင့်အပိုလုပ်ငန်းဆောင်တာများပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာကုန်ပစ္စည်း၊ ကတ်တလောက်၊ ဆိုက်မြေပုံ၊ ရုပ်ပုံပြခန်းများ၊ အကြောင်းအရာများ၊
CMS ၏အရိုးရှင်းဆုံးသောအယူအဆသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖန်တီးခြင်းကိုခွင့်ပြုရုံသာမကလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သောနည်းပညာများကိုနက်နက်နဲနဲသိရန်မလိုဘဲ၎င်းအားတီထွင်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရမည်။တစ်နည်းပြောရလျှင်၎င်းတို့သည်ဒေသ၏အခြေခံအသုံးပြုသူများအားဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုအလွယ်တကူတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြေခံဗဟုသုတအချို့ဖြင့်ဖန်တီးရန်နှင့်စီမံရန်ခွင့်ပြုသင့်သည်။
၎င်းအတွက်ကောင်းသော WordPress ကဲ့သို့သောကောင်းသော CMS နှစ်ခုကိုခွဲခြားရမည်ပုံမှန်အသုံးပြုသူများသည်ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုလုံးအဖြစ်မြင်သောအရာ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်အမြင်အာရုံအသွင်အပြင်နှင့်၎င်း၏အကြောင်းအရာ, စာသားနှင့်မာလ်တီမီဒီယာ၏ပုံစံနှစ်ခုလုံး: ရုံးဖိုင်တွေ, ပုံရိပ်တွေ, ကာတွန်း, ဗီဒီယိုများ, အသံ, အခြားသူများအကြား။
ထို့ကြောင့်၊ ပြည့်စုံပြီးအလုပ်လုပ်သော CMS တွင်ဒီဇိုင်းနှင့်ယင်း၏ပါဝင်မှုသည်လွတ်လပ်ရမည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလိုက်သောအခါ၊ ၎င်းသည်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာကိုမသက်ရောက်ပါ၊ ၄ င်းသည် ဆက်လက်၍ ပြသရန်နှင့်ဒီဇိုင်းအသစ်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့်၎င်းတွင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာအတွင်းဒီဇိုင်းဒြပ်စင်များထည့်သွင်းခြင်းသည်အလေ့အကျင့်ကောင်းမဟုတ်ပါ။ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုသည်ထိုအရာများကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်ပါ ၀ င်သည့်အရာအားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကဲ့သို့သောအားစိုက်ထုတ်ခြင်းများကိုမဆိုလိုပေ။
ထို့ကြောင့် CMS ဖြင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖန်တီးသောအခါပထမဆုံးသောအလုပ်များတစ်ခုမှာ၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္appearanceာန်သို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်အကြောင်းအရာကိုအသေအချာရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်သီးသန့်ထားရှိသောနေရာများတွင်ပြသမည့်အကြောင်းအရာများကိုဤ template တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ကောင်းစွာပြီးပြည့်စုံသော CMS သည်ပုံမှန်အားဖြင့်စွမ်းရည်များ၊ အင်္ဂါရပ်များ၊အပိုဆောင်း module များသို့မဟုတ်ပြင်ပလိုက်လျောညီထွေမှုများမလိုဘဲအခြေခံဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဖန်တီးမှုနှင့် modules, add-ons, ဒါမှမဟုတ်တိကျတဲ့လိုက်လျောညီထွေသို့မဟုတ်ပြင်ပပေါင်းစည်းမှုမှတဆင့်အဆင့်မြင့်က်ဘ်ဆိုက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်ကူညီပေးသော။
၎င်းသည်မည်သည့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စက်မှမဆို Web Browser နှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားသောမည်သည့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းမှမဆို၎င်းကိုအဝေးမှအဝေးသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးရမည်။ ၎င်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောအင်္ဂါရပ် (သို့) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
၎င်းသည် configuration options ကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါက၎င်းကိုအခြေခံအသုံးပြုသူများ (ရုံးအလိုအလျောက်) အားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်အမြန်အသုံးပြုခြင်းကိုဤ tool ၏ထိရောက်ထိရောက်သော command (Editing and content management) အတွက်အသုံးပြုသင့်သည်။ ယင်း၏အုပ်ချုပ်ရေး။
၎င်းတွင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများအားစာနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ပရိုဂရမ်နှင့်ထုတ်ဝေရန်အတွက်ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများပါ ၀ င်ရမည်။ ရုံးသုံးဖိုင်များ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ကာတွန်းရုပ်ပုံများ၊
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု interface ကို
၎င်းသည်ကိရိယာသို့မဟုတ်ယင်းကိုတပ်ဆင်ထားသည့်ပလက်ဖောင်းအကြောင်းပိုမိုနက်ရှိုင်းသောဗဟုသုတလိုအပ်သည့်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်စာသားဖိုင်များကိုကိုင်တွယ်ခြင်းအားအနိမ့်ဆုံးနှင့် / သို့မဟုတ်ရှောင်ရှားရန် ၄ င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာဂရပ်ဖစ်အုပ်ချုပ်ရေးမျက်နှာပြင်တွင်အသုံးအများဆုံးနှင့်အသုံး ၀ င်သော configuration options ကိုပြသသင့်သည်။
စာရေးသူ၊ အယ်ဒီတာများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများစသည့်မတူကွဲပြားသောအခန်းကဏ္ and များနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများအမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုသူကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖန်တီး၍ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ သင်၏ဝင်ရောက်ခွင့်များ၊ အခွင့်ထူးများသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ချက်များ။
၎င်းတွင်စာသားတည်းဖြတ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုအကောင်းဆုံးပုံစံပေးရာတွင်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်တတ်နိုင်သမျှအပြည့်အဝနှင့်အဆင့်မြင့်ပြီးထည့်သွင်းသင့်သည်။ ကောင်းမွန်သောစာသားတည်းဖြတ်သူသည်များစွာသောအရာများတွင်စာလုံးစောင်းနှင့်စာလုံးစောင်းများအသုံးပြုခြင်း၊ နံပါတ်များစာရင်းသို့မဟုတ်မပါဝင်သည့်အရာများအနက်အခြားအရာများမှရွေးချယ်စရာများပါ ၀ င်ရမည်။
Plugins များနှင့် Interfaces Programming
၎င်းသည် Plugins နှင့် Programming Interface Applications (API) ၏တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကို content manager အသစ်သို့ပိုမိုကောင်းမွန်သောသို့မဟုတ်တိကျသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုထည့်သွင်းခွင့်ပြုရမည်။ Tool ကိုယ်နှိုက်နှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ကြီးထွားမှုကိုခွင့်ပြုခြင်း။
စီစဉ်ထား / စိတ်ကြိုက်အမြင်အာရုံဒီဇိုင်း
၀ က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များသည်သူတို့၏ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအလုပ်အပေါ်တွင်ကန့်သတ်ချက်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်မှုများမပြုလုပ်နိုင်စေရန်နှင့် ၄ င်းတို့၏ဒီဇိုင်းများကိုအလွယ်တကူပေါင်းစည်းနိုင်စေရန်၎င်းသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏ဒီဇိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသင့်သည်။
ငါတို့အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ CMS ကောင်းတစ်ခုသည်ဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ခွင့်ပြုသင့်သည်၊ အယ်ဒီတာများသို့မဟုတ်စာရေးသူများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြောင်းအလဲမရှိဘဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်နှင့်ပေါင်းစည်းရန်ခွင့်ပြုသင့်သည်။
SEO ဆိုသည်မှာ positioning ကို
အဓိကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၏ ၀ က်ဘ်စီမံသူများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များသို့မဟုတ်ပေါ်လစီများနှင့်ကိုက်ညီသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်အောင်မြင်ရမည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုဖန်တီးခြင်းသည်အခြေခံတည်နေရာအချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
၎င်းသည်ဆာဗာ၏အရင်းအမြစ်များကိုအလွန်အကျွံမတင်သောကွန်ပျူတာ application တစ်ခုဖြစ်ရမည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏အရင်းအမြစ်များကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကွပ်မျက်မှုအတွက် (ဆင်ဆာလုပ်ခြင်း၊ CPU၊ hard disk) အတွက်ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် web server ၏အထွေထွေစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမထိခိုက်စေဘဲဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုလည်းဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၎င်းသည်ထိရောက်ပြီးထိရောက်သောနည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လျှောက်လွှာ၏မအောင်မြင်မှုများနှင့်အမှားများကိုဂရုပြုရန်နှင့်မည်သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုမဆိုကူညီနိုင်အောင်ကူညီပေးသည့်အခြားကိရိယာများမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုသူများ၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုရမ်များ၊ ဝီကီများ၊ ထို့ကြောင့်လျင်မြန်စွာဖြေရှင်းပါ။
ယခုလက်ရှိ WordPress (WP) သည်ဤinရိယာရှိအသုံးချဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံး၏အသုံးအများဆုံး CMS တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်မျှရိုးရှင်းပြီးမည်မျှပင်ခိုင်မြဲစေကာမူဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ခြင်းသာမကမည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမဆိုအဓိကထားပြီးအသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာသောအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ရှိသည်။
WP သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် M2003 Little နှင့် Matt Mullenweg တို့မှ b2 / cafelog fork ကိုဖန်တီးခဲ့ချိန်ကစတင်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့အဲဒီအချိန်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ ကြော့ရှင်းပြီးစနစ်တကျပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးစနစ်လိုအပ်နေလို့ပါ။ ယနေ့ WP သည်ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုသည် PHP၊ y က MySQL Database Manager (DB) အနေနှင့် နှင့် Apache ဝန်ဆောင်မှုနိမ့်အဖြစ် GPL လိုင်စင်။ ထို့ကြောင့်၊ လျှောက်လွှာသို့မဟုတ် SW ကိရိယာသည်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီသည် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် (CA) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (SL).
WP သည်ခိုင်ခံ့သော CMS ဖြစ်ပြီးဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ အခမဲ့ဖြစ်သည်။သို့သော်၎င်းသည်လူသိများသောအလွန်များပြားလှပြီးအခမဲ့ဖြစ်ပြီးလစာကောင်းသောဆိုဒ်ကိုထုတ်ဝေခြင်းနှင့် hosting ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည် «WordPress.com« အရာအလွန်မကြာခဏ updates များကိုလက်ခံရရှိသည်။ ၎င်းတွင်လူသိများသောအခြားအစ်မဒိုမိန်းလည်းရှိသည် «WordPress.org« စပိန်ဘာသာနဲ့လည်းရနိုင်တယ်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်အလွန်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှိသည်။
ကျယ်ပြန့်သောလေဖြတ်မှုဖြင့်၎င်းသည်အလွန်အမင်းအသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်၎င်းသည်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသုံးစွဲသူများနှင့်၎င်းတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူများနှင့် ၄ င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်စီမံကိန်းများအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်အစွမ်းထက်သောဘလော့ဂ်များကဲ့သို့အထူးလိုအပ်ချက်မရှိသောအသေးစားဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောတရားဝင်နှင့်တရား ၀ င်မဟုတ်သော plugins များစာကြည့်တိုက်သည်အကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အားလုံးနီးပါးကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ကြီးမားသောဖိုရမ်များဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနှင့်ဘာသာစကားများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော၊ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူ၊ နည်းစနစ်ကျကျနှင့်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောသုံးစွဲသူများ၏ကြီးမားသောအသိုင်းအဝိုင်းသည်ဤကိရိယာနှင့်ပေါ်ပေါက်လာသောပြproblemsနာများ (အမှားအယွင်းများနှင့်အမှားအယွင်းများ) ကိုဖြေရှင်းရာတွင်အသုံးဝင်သည်။
WP ဟာမပြည့်စုံပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အရမ်းပြီးပြည့်စုံတယ်။ ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်း၏ 'ပြင်ပနေရာ' တွင်အချို့သောကန့်သတ်ချက်များရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားပြီးအခမဲ့နှင့်အခကြေးငွေပေးသောပလပ်ဂင်များ၊ အခင်းအကျင်းများနှင့်တင်းပလိတ်များကိုမည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အတွက်မဆိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
ဤစာစောင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် CMS ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းနှင့် WordPress ဆိုသည်ကိုနက်ရှိုင်းစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ WP နှင့်ပတ်သက်သည့်အနာဂတ်ရေးသားချက်များတွင်၎င်းသည်လက်ရှိအင်္ဂါရပ်များ၊ ရပ်ရွာ၊ အထောက်အပံ့၊ Themes နှင့် Plugins တို့အကြောင်းနှင့်လက်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးအကြောင်းအသေးစိတ်အနည်းငယ်လေ့လာပါမည်။ ထုတ်ဝေမှု၏ကန ဦး ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်လုံခြုံရေးအကြံပေးချက်များကိုရှာဖွေခြင်းနှင့် WP တွင်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်တပ်ဆင်နိုင်သောအခြားနည်းလမ်းများရှိကြောင်းဖော်ထုတ်ခြင်းအပြင်
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝသောနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများမှသာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိရန်ခွင့်ပြုခြင်းသည်မသင့်တော်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသင့်သည်; ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက်မှီခိုရခြင်းအကြောင်းအရင်းများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုယ်တိုင်အားပြန်လည်ရှင်သန်လာစေရန်ဖြစ်သည်။
နှင့်ယုတ္တိနည်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်သည်တိုင်းတာရန်တည်ဆောက်သည့်အကြောင်းအရာမန်နေဂျာအပေါ်ယေဘူယျ CMS ကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်း၊ ကြီးမားသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းတွင်အကူအညီနှင့်ပံ့ပိုးမှုပေးသော၊ ပေးဆောင်ရသောသို့မဟုတ်အခမဲ့ဖြစ်သော modules (သို့) ဖြည့်စွက်မှုများပါဝင်သည်။ WordPress ကိုအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံး CMS ၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » WordPress: CMS ဆိုတာဘာလဲ။ Utility နှင့် Features
Linux kernel 5.1 ရောက်လာပြီ။ ဒါကသူ့ရဲ့သတင်းပဲ